Medical Writings: Comments on Lesions on penis
STI ဖြစ်ရင် အိမ်က မိန်းမ၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ရဲ့ လိင်ဆက်ဆံဘက်ကိုပါ အတူတူ ဆေးကုဖို့ လိုကြောင်း၊ ဘာကြောင့် လိုအပ်ကြောင်းလေးပါ ပြောပေးပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ဖြစ်နေကျတွေက ယောက်ျားက မိန်းမ မသိအောင် ဆေးကုထားပြီး မိန်းမက ကလေးမွေးခါနီး စစ်မှ ဆစ်ဖလစ်ပိုး တွေ့တာမျိုး ဖြစ်တတ်တာ။ အဲဒီအချိန်မှာ သူတို့က မေ့နေလောက်ပြီဆိုတော့ မိန်းမကို ဘယ်ကရလဲလို့တောင် ပြန်စွပ်စွဲတတ်ကြသေးတာ။ အဲလိုနဲ့ ကွဲတဲ့ စုံတွဲတွေတောင် ရှိဖူးပါတယ်။
ဆ/ာ ကျွန်တော့် ဂွေးဥ အတွင်းအိတ် ဥပေါ်မှာအကြိတ်လုံးလို နှစ်လုံးဖြစ်နေလို့ပါဆရာ။ ဘယ်ဆရာဝန်နဲ့ ပြရမလဲမသိဘူး ဆရာ. ညွန်ကြားပေးပါ ဆရာ။
ဂွေးဥ အတွင်းအိတ် ဥပေါ်မှာ အကြိတ်လုံးလို နှစ်လုံး စာနဲ့မေးတာမို့ မျက်စိနဲ့ကြည့် လက်နဲ့စမ်းရသလို မသေခြာတာမို့ မှန်းပြီး ရမ်းကုလုပ်ရတော့မှာဘဲဗျာ။ ယောက်ကျားတွေ ကပ်ပယ်အိတ် ခေါ် Scrotum တ၀ှိုက်မှာ ဖြစ်တတ်တာတွေက အမျိုးပေါင် (၁၃)ခုတိတိ ရှိပါတယ်။ မကြောက်ပါနဲ့။ အများစုရောဂါတွေက ကုတာလွယ်ပြီး ပျောက်ဘို့ မခက်ကြပါ။
Re: No, I'm Sayama
ကိစ္စ မရှိပါဘူး ဆရာ။ လာပြီး ရေးပေးနေတာ၊ မေးခွန်းတွေ ဖြေပေးနေတာကို အရမ်း ကျေးဇူတင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သော၉နှစ် လောက်ကသေးသးလေးတစ်လဲုးထဲပါ။ နောက်၎ နှစ်လောက်ကျတော့ တစ်လဲုးထပ် ပေါ်လာပါတယ်။ ဆန်စေ့ လောက်ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတလေကျရင် လက်လေးနဲ့သွားစမ်းကြည့်ရင် အောင့်ပါတယ်။ စမ်းကြည့်ရင် မအောင့်တာများပါတယ်။ တစ်ခါတလေကျရင်တော့ သေးသွားပါတယ်။ အနေအထားပြောင်းရင်လည်း သေးလိုက် ကြီးလိုက် ဖြစ်ပါတယ် ဆရာ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲညွန်ကြားပေးပါဗျာ။
ဆရာ ယောက်ကျား တစ်ယောက် လိင်တံ ဟာ လိင် ဆက်ဆံ ဖိုအတွက် ဘယ်လောက် ရှိသင် ဘာလဲ ဆရာ ပြည်ပြည်စုံစုံပြောပြပေးပါဆရာ အမှားပါပါသွာရင်း ခွင်လွတ်ပါဆရာ။
I think the problems with both men and women are ' what should?' Actually, you should believe what you have are correct size. Please just beware of all the risks you will take if you decided to have an unsafe sex.